भारतको पांढरकावडा क्षेत्र केही दिनदेखि त्रस्त, बघिनी चिडियाखानाबाट फुस्को | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
भारतको पांढरकावडा क्षेत्र केही दिनदेखि त्रस्त, बघिनी चिडियाखानाबाट फुस्को
भारतको महाराष्ट्र जिल्लाको पांढरकावडा क्षेत्र केही दिनदेखि त्रस्त छ । त्यो क्षेत्रमा एक नरभक्षी बघिनी चिडियाखानाबाट फुत्केर खुल्ला हिडिरहेको छ ।
टी१ नाम दिइएको उक्त बघिनीले पछिल्लो केही दिनभित्र यो क्षेत्रको १३ मानिस र कयैन जनावरहरु मारिसकेको छ ।
अफसोचको कुरा बघिनीलाई समात्न वन विभागले गरिरहेको कयैन दिनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । वन रेन्जरहरु नरभक्षि समात्नकै लागि दिन रात गश्ति लगाइरहेको छन् ।
प्रशासनले अब बघिनी समात्ने आफ्नो कोसिसको सिलसिलामा सोमबार एक थप विकल्प अघि सारेको छ । सोमबारबाट बघिनीको शिकारको गर्न ‘केन कोरसो’ प्रजातिको दुई शिकारी कुकुरलाई मैदान उतारिएको छ ।
सम्भवत भारतमा बाघलाई पक्रन शिकारी कुकुर प्रयोग गरिएको यो पहिलो पटक हो । कुकुरलाई बाघको पछाडि छोड्नु अघि चिडियाखानामा रहदाँको उसको खोरमा गरेको पिसाब सुघाँईको थियो ।
केन कोरसो रोमन शासनसम्म पछाडि गएको निक्कै पुरानो जातको इटालियन कुकुर हो । यसलाई सम्पतीको सुरक्षा गर्न र जंगली भालुको शिकारको लागि विकास गरिएको हो । यो नश्लको कुकुर निक्कै बलियो हुन्छ र यो बाघसँग पनि डराउदैन ।
केन कोरसो प्रजातिको एक कुकुरलाई भारु ६ लाख बराबर पर्छ । टी१ बघिनीको शिकार गर्न प्रयोग गर्न लागिएको कुकुर हैदरावाद निवासी सार्पसुटर नवाब शफथ अलि खानको हो । यी कुकुरहरु उनको तारबारयुक्त दरबारको प्रागढणमा बस्ने गथ्र्ये ।
भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इण्डियासँग कुरा गर्दै वन्यजन्तु आरक्षको प्रमुख संरक्षणकर्ता एके मिश्राले यसलाई पुष्टि गर्दै भने,“ ठूलो प्रयास पछि केन कारसोलाई सोमबार मैदानमा उतारिएको छ । ”
मिश्राले बघिनीलाई लिएर आफूहरुको सबैभन्दा ठूलो डर भनेको उसलाई भेट्दै नभेट्ने हो कि भन्ने रहेको बताए ।
“उसले दुई वटा घोडा मारी तर हामीले जालमा पार्न राखेको जीवतर्फ गइन । क्यामेरा ट्रापमा पनि उसको तस्वीरहरु भेटिएको छैन । उसलाई बेहोस बनाउनको लागि पहिले त उसको अवस्थिति पत्ता लगाउनु प¥यो । उ लुकेको ठाँउ पत्ता लागेपछि बल्ल कुकुरहरुलाई प्रयोग गरेर बाहिर निकाल्न सकिन्छ,” उनले भने ।
यो कुकुरमा खास के हो ?
केन कोरसोको सम्पत्ति, पशुहरु र परिवारको सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिन्छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने यसले रात्रिकालिन चौकिदारको भूमिका निभाउछन् ।
अमेरिकन केनेल क्लबका अनुसार यो कुकुरको उचाई २५ देखि २८ इन्च हुन्छ र जीवनकाल ९–१२ वर्ष हुन्छ । ४५–५० किलो सम्म वजन हुने यो कुकुरको टाउको भने निक्कै ठूलो हुने गर्छ ।
यो कुकुर फुर्तिलो, तालिम दिन योग्य, निडर हुने बताइन्छ । यही कारण यो कुकुर संसारका कयैन देशहरुमा प्रहरी कुकुरको रुपमा प्रयोग पनि गरिन्छ ।
२० औं शताब्दीमा यसको मुल थलो दक्षिण इटालीको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका फार्महरुमा रुपान्तरण हुन थाले पछि यसको प्रयोग घट्न थालेपछि यो कुकुर दुर्लभ हुन थालेको थियो । त्यसबेला यो कुकुर बचाउन कयैन समूहहरु बनेका थिए ।
विद्रोहीको आक्रमणबाट १६ जनाको मृत्यु
संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन धर्तीमा होइन, आकाशमा बन्नेः धर्तीतर्फ झुण्डिने, घुमिरहने
असार २१, २०७५
आतङककारी हमलामा परी सात सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
असोज १८, २०७५
संसारकै धनी देश यसरी बन्न पुग्यो गरीब
फागुन १५, २०७४
पृथ्वीमुनि १०,००० खर्ब टन हिरा पत्ता लाग्यो, पहिले अनुमान गरिएभन्दा हजार गुणा बढी रहेको निष्कर्ष
साउन ३, २०७५